Isitatimende sephephandaba: Umnyango wezeMfundo ukhiphe umbiko we-‘No-Fees Varsity’ - Amanda.mobi isiXhosa
Posted by Nat Whalley 148sc on October 30, 2015
Inhlangano yokugqugquzela amalungelo omphakathi, i-amandla.mobi, ibe nempumelelo ngemuva kokufaka uhlu lwezikhalo kuMnyango wezeMfundo ePhakeme ephoqa uMnyango ukuthi ukhiphe umbiko we-‘No-Fees Varsity’. UMnyango uthumele lo mbiko kwi-amandla.mobi namhlanje ekuseni, NgoLwesine, ngemuva kwesicelo ebesifakwe ngokomgomo wokuPhucula ukuFinyelela oLwazini, kuMqondisi-Jikele kanye kuSekela Mqondisi-Jikele ezinsukwini ezimbili ezedlule.
Zombili lezi zikhulu bezinikezwe izinsuku ezingu-14 ukuthi ziphendule kulesi sicelo. Umbiko we-’No-Fees Varsity’ wawuthulwe kuNgqongqoshe wezeMfundo ePhakeme, uMnu Blade Nzimande, ngoZibandlela ka-2012 kodwa wawungazange udluliselwe emphakathini.
“Ukukhishwa kwalo mbiko kungokunqoba okukhulu kumalunga e-amandla.mobi asaqhubeka nokukhalisana nabafundi mayelana nemfundo ephusile futhi yamahhala kulabo abayidinga kakhulu. Sihamba phezu kwamazwi abafundi ngokuthi imfundo akufanele ibe ngeyabadla izambane likapondo,” kusho uKoketso Moeti, ongumunye wabakhankasi be amandla.mobi.
Umbiko unaba kabanzi ngeziphakamiso ezingu-12 ezibonisa ukuthi amanyuvesi angenzenjani ukuthi afeze ukufundisa mahhala abantu abaphuma emakhaya antulayo. Lokhu kuphinde kuxhase izikhalo ezibekwe yinhlangano yabafundi i-Fees Must Fall, kubuye kuveze ukuthi uNgqongqoshe Nzimande unawo amandla okuthatha izinyathelo eziqatha ezingaholela ekutheni abafundi bangachithwa ngenxa yokuswela imali yokufunda.
Iziphakamiso ezimqoka eziqukethwe umbiko:
Imfundo yamahhala kumanyuvesi kufanele iqaliswe kubafundi abantulayo eNingizimu Afrika ngokusetshenziswa kanye nokuthuthukiswa kwe-NSFAS kanye nemigomo yayo, ngokuqinisekisa ukulandelwa kwemigomo ebekiwe, kanye nangokuqinisekisa ukuthi imigomo kanye nokuphathwa kwezimali kanye nokukhokhwa kwezikweletu kuyashintshwa.
Ingxenye yezimali zokukhokhela imfundo yamahhala kufanele ziqhamuke esikhwameni se-Sector Education and Training Authorities (SETA) esibekwe yizimboni zosomabhisinisi kanye nomphakathi ekubhekeleni ukuqhubeka kokusebenza ngesimo kwe-NSFAS.
Kubalulekile ukubalula ukuthi amanani asetshenzisiwe kulo mbiko awangonyaka ka-2010 okuchaza ukuthi kufanele alungiswe ukuze aveze ukuthi angakanani kunyaka ka-2015.
Ubumqoka balo mbiko bungephikiswe njengoba uphinde uveze ukuthi abafundi abaphuma kumakhaya antulayo baphinde babhekane nezinkinga zokuswela ukudla, indawo yokuhlala, kanye nezinye izidingo phezu kokuswela imali.
Uphinde uveze izinkinga ezihlangatshezwa amakhaya anenzuzo engaphezulu kunalawa ahluphekayo kodwa engaphansi kwezinga elingakwazi ukuthi abenezinye izinhlelo zokuthola imali. La makhaya ahlanganisa abantu abasebenzela uhulumeni njengamaphoyisa, abahlengikazi, kanye nothisha.
Ukulandela kokuphothulwa kwalo mbiko uNzimande uqoke ithimba elizophenya ngalolu daba liphinde lenze iziphakamiso. Namanyuvesi nawo aphinde athula imibono yawo mayelana nemfundo yamahhala, izidingo zezimali zabafundi, kanye nokungakhushulwa kwezimali zokufunda enyuvesi.
Ukukhishwa kwalo mbiko kanye nokulandelwa kokusetshenziswa kweziphakamiso eziqukethwe kuwo ngesikhathi owathulwa ngaso kuNgqongqoshe bekungasiza ekugwemeni ukuchithwa kwezinkulungwane zabafundi ngenxa yokuswela imali eminyakeni emithathu edlule. Bekuzophinda kusize ezingxoxweni ezibalulekile zezwe mayelana nokufezwa kweziphakamiso eziqukethwe kulo mbiko.
Umbiko ogcwele utholakala la: www.amandla.mobi/free_varsity
Mayelana nengxoxo thinta: Nqaba Mpofu, 073 441 6725, nqaba@amandla.mobi
Uma ufisa ukuba ilunga thumela i-sms/Whatsapp/please call me ku-074 357 6937